898 मा सुत्ने 8 उत्तम सोफे मास्क
by एम्बर नोलान
दिनको समयमा केही सुत्न समात्न वा रोशनीसँग हवाई जहाजमा गाह्रो हुन सक्छ (र विमानस्थलको निद्रा मास्कहरू जसले भेडामा पार्ने उडानहरू प्रायः यसलाई काटिन सक्दैन)। धेरैले अझै रोशन गरिसकेपछि छाला चुरोट वा अनुहार बन्द गर्नुहोस्। त्यहाँ सोझो मास्कहरू छन् जसले अवधारणामा सुधार गर्न प्रयास गर्दछ र केहि गुणस्तरको उत्पाद वितरण गर्न अरु भन्दा बढी सफल छन्। जान्न चाहानुहुन्छ कुन पैसा तपाईको पैसा लायक छ? जब तपाईं यात्रा गर्दा केही बन्द आँखाहरू समात्न खोज्दै यहाँका लागि निद्रा मास्कहरू यहाँ छन्।
प्रतियोगिता भन्दा माथि एक कट छ कि एक किफायती मूल्य मा एक आरामदायक फिट को लागि, Bedtime Bliss Contoured नींद मास्क एक राम्रो विकल्प हो। आँखामा दबाब नदिई तपाईंको अनुहारलाई फिट गर्न डिजाइन गरिएको, मुखौटा विशेषताहरू समायोज्य पट्टाहरू, नाक वरिपरि एक खुट्टाको आकार, नरम सामग्री र यसलाई पूर्ण रूपमा ब्लक आउट गर्दछ। पक्षमा सफा प्याडिंगले यसलाई रक्सीबाट रोक्न सक्छ र यसलाई सजिलो बनाउछ कि तपाईले यो गर्नु हुन्छ। मास्क पनि एक सुविधाजनक लेबुल र कानप्लगको साथ आउँछ पृष्ठभूमि शोरलाई डुब्न। धेरै अमेजन खरिदहरूले भने कि उनीहरूले बिदा टाइम ब्लास्ससँग सफलता पाउन अघि धेरै निद्रा मास्कहरू खोजे।
विविध विविधता रङ संयोजन, ढाँचा र शैलियहरुको लागी, बकी 40 ब्लाइक्स लक्जरी अल्ट्रालाइट सुत्न मास्क मा जाने बाटो हो। 20 देखि अधिक रंगहरू र ढाँचाहरू फराकिलो फूलहरू पोलकका थोप्लाहरूमा छन्। त्यसोभए तपाईं सजिलै आफ्नो मुखौटा पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। मुखौटा पलिएस्टर पलिएरेथेन फोमबाट बनेको छ, एक चिकनी, अल्ट्रालाइट डिजाइन जसले अनुहारमा आराम गर्दछ।
डुप्पी भयो, आँखाको वरिपरि कपले ढोकामा सजिलै भित्र भित्र प्लिंक गर्न अनुमति दिन्छ, र एक लोचदार ब्यान्डले यसलाई स्थानमा राख्न मद्दत गर्दछ। मुखौटा लामो उडानहरूको लागि आदर्श छ, जो रात परिवर्तनहरू वा तनावको टाउको दुख्ने प्रलोभन गर्ने काम गर्दछ किनभने यसले प्रकाशलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्छ। यस चीजलाई धोएर हात हाल्नु हुनुहोस्।
एक सुखशिलाको लागि, "मिनी स्पा" विमानमा बस, बस वा लगभग जहाँ पनि, ग्राफिन टाइम्सबाट ताप आँखा मास्कले तपाईंलाई राम्रो सुत्न मद्दत गर्नेछ। मास्क पूर्ण अन्धकार बनाउँछ र एक ब्याट्री बैंक वा अन्य स्रोतबाट पावरमा एक सुविधाजनक USB प्लग छ।
तीन अलग तापक्रम सेटिंग्स संग यो आँखा र मांसपेशियों को सोचा छ, र अमेजन खरीदारहरु ले पाया छ कि यो माइग्रेन्स, कफी आँखाहरु र झुर्रियों संग मदद गर्दछ। रक्त प्रवाह वृद्धि गर्न डिजाइन गरिएको छ, यो EPA अनुमोदित छ र विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जन गर्दैन। सुरक्षाको लागि, घडी एक घन्टा पछि बन्द हुन्छ, यसैले यदि तपाईं सुत्नुहुन्छ (तपाईले तपाईंलाई गरिरहनुभएको छ) जुन यो रातभरि बस्दैन।
एक सरल डिजाइनको लागि जसले तपाईंलाई सुत्न मद्दत पुर्याउनको लागि काम गर्दछ, जर्सी स्लिम्बर उत्कृष्ट विकल्प हो। यो नींद मुखौटा संग कुनै घण्टी र सीटहरू छैन, तर यसलाई सफा गर्न सुख्खा र सुख्खाको लागि 100 प्रतिशत रेशमको बनाइएको छ र आराममा, समायोज्य लोचदार पट्टाले यसलाई स्थानमा राख्नुको साथै - तपाईंको कपालमा समात्न बिना। अन्य मास्कहरूको विपरीत, यो तपाईंको अनुहारमा फ्ल्याक बिना ठिकै ठाउँमा खाली छ। हल्का-अवरोध, कालो निस्क मुखौटाले सामानमा धेरै सानो ठाउँ लिन्छ, यो लामो यात्राको लागि उत्तम यात्रा सहायक बनाउँछ।
लवेंडर स्पा स्पा चिकित्सकहरु द्वारा अक्सर प्रयोग गरिन्छ मालिश मालिश को समयमा ग्राहकहरुलाई आराम गर्न को लागि र यो शांत खुशबू मास्टर मेयर नींद मुखौटा को अंदर छ। यो हस्तनिर्मित मास्क एक बांस रेशम समर्थनको साथमा छालामा नरम र सुन्दर छ। मास्क को अनुहार र अनुहार को अधिक कवर गर्न को लागि डिजाइन गरिएको छ, अनावश्यक रोशनी को रोकन को लागि, जबकि लोचदार पट्टा यो ठाँउ मा राख्छ। ठूलो हेरचाह निर्माणमा लिइयो, ताकि मुखमा खरोंच वा पिचाइ बिना सास फेर्ने। र आंतरिक प्याडिंग एक सहज फिट सुनिश्चित गर्दछ। मुखौटा गुलाबी, खैरो वा कालोमा उपलब्ध छ।
यदि तपाईं अनुहार मास्कको लागि ठूलो रकम बाहिर खोल्न चाहनुहुन्न भने, तर सुत्न मद्दतको लागि राम्रो विकल्प चाहिन्छ, किमको सो मास्क एक राम्रो शर्त हो। मुखौटा प्राकृतिक धुवाँ रेशमबाट बनेको छ, त्यसैले यो नरम र सास हुन्छ, र हल्का कपडाले आँखामा दबाब थप्दैन। साथै, मुखौटा आँखाबाट सम्पर्कबाट बचाउन डिजाइन गरिएको छ (ताकि तपाईं आफ्नो मेकअप राख्न सक्नुहुनेछ) र मुखौटाको नाकले प्रकाशलाई अनुमति दिदैन। लचीला र वेल्क्रो पट्टा 18 र 25 इन्चको बीचमा समायोजन योग्य हुन्छ र मुखमा शोर हुन्छ। -केन्सिङलिंग earplugs। ड्र्रास्ट्रिंग लेजर बैगले यसलाई व्यवस्थित राख्छ र उत्कृष्ट वरदान दिन्छ।
जो लोग विभिन्न स्केन्ट र कपडे को एलर्जी संवेदनशीलता को रूप मा ड्रीम स्लीपर मास्क, एक hypoallergenic र लेटेक्स फ्रि निस्क मास्क मा विचार गर्नु पर्छ। साधारण, कार्यात्मक डिजाइनले आँखाबाट ज्योतिलाई पूर्ण रूपमा रोक्छ र अँध्यारो रहन सक्दछ तापनि यसले तपाईंको निद्रामा थोडा परिवर्तन गर्दछ। पछाडीको लोचदार ब्यान्डले यसलाई स्थानमा राख्दछ र साइड स्वेडर र बेस्सन्देही मोडहरूसँग राम्ररी काम गर्दछ। मुखौटा केहि भन्दा कम सानो pricier छ, तर वारंटी अद्भुत छ: यदि तपाईं मुखौटा गुमाउनु हुन्छ भने तिनीहरूले यसलाई नि: शुल्कको लागि प्रतिस्थापित गर्नेछन् (तपाइँ भर्खरै ढुवानी र हैंडलिंगको लागि भुक्तानी गर्नुहुन्छ)। अमेजन खरीदारहरूले उल्लेख गरे कि मेकअप, तेल र पसीना पट्टि सामग्रीमा, तथापि, यो मेशिन धुलो छ।
एक शांत, सुख्खा अनुहार मास्क को लागि आराम र ध्यान संग मदद गर्दछ, FoMI जेल बीड आँखा मास्क को कोशिश करो। सर्दी-थेरेपी मुखौटा जेलको मोतीहरू बनाइएको छ जुन तपाईंको अनुहारको वरिपरि आउँदछ, छालामा निस्किने विनिलको बाहिरी बाहिरी संग। मुखौटामा फ्रीजरमा 30 मिनेटको लागि (वा घण्टाको फ्रिज) र अनुहारमा राख्नुहोस्, लोचदार पट्टि समायोजन गर्नुहोस्। मास्क माइक्रोकवमा पनि ताप मास्कको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तातो र चिसो तापमानले माइग्रेन्स, आँखा पिफनेस र अन्य मेडिकल मामिलामा मद्दत गर्न सक्छ। प्याक एक मिलान कपडा आँखा मुखौटा मा फिसल गर्दछ र एक साथ सुप्रीमिंग नींद मास्क को रूप मा सेवा गर्दछ।
के तपाइँ आफ्नो अर्को यात्रामा एक ब्याकप्याक वा डिफेल लिनु पर्छ?
89बेस्ट स्नोश्रोहरू 2018 मा खरिद गर्न
89बेइजिङ नायलॉन ट्याट बैगहरू 2018 मा खरीद गर्न
8 केनेथ कोल रिसेप्शन सामान सामानहरू 2018 मा खरीद गर्नका लागि
2018 मा खरीदारी को लागि 8 सर्वश्रेष्ठ पटोंगिया सामान सामान
मोन्ट्रियल वर्ल्ड फिलिम फेस्टिवल 2017
ढिलो खाना मोन्ट्रियल: स्थानीय र किन खानेकुरा खानुहोस्
ब्रसेल्स देखि पेरिस सम्म कसरी यात्रा गर्ने?
ओकलाहोमा विश्वविद्यालयले चाँडै महिला बास्केटबल
जापानको ओबोन फेस्टिवलको लागि एक गाइड
यी कमेन्टहरूमा सुपरमार्रोको रूपमा खाओ-थिमिड रेस्टुरेन्टहरू
अक्टोबरमा लस एन्जलस
10 आकर्षक मुम्बई यात्रा
मकाउ एक दिवसको भ्रमण
टेक्सास रियो ग्रान्ड घाटी मा शीर्ष गोल्फ कोर्स
लन्डनमा नि: शुल्क बहालीहरू: कहाँ जाने जान्नुहोस्
जर्जियामाथि6वटा झण्डाहरू
अक्टोबरमा अक्टोबर: मौसम र घटनाक्रम गाइड